राप्रपाको अहिलेको नेतृत्व असफल भयो : नेता हेमजङ्ग गुरुङ
पशुपति समशेर राणा, कमल थापा, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीलगायत संस्थापन अध्यक्ष लोकेन्द्रबहादुर चन्द उनीहरुलाई पार्टीको संरक्षक बनाउने
बिहीबार, मंसिर ९, २०७८ क्यापिटल दैनिक
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातान्त्र पार्टी (राप्रपा) का नेता हेमजङ्ग गुरुङले राप्रपाको अहिलेको नेतृत्व असफल भएको आरोप लगाएका छन् ।
क्यापिटल एफएमको दैनिक कार्यक्रम फ्रन्टलाइनमा बोल्दै नेता गुरुङले राप्रपाको अहिलेको नेतृत्व असफल भएकाले अबको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
उनले पशुपति समशेर राणा, कमल थापा, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीलगायत संस्थापन अध्यक्ष लोकेन्द्रबहादुर चन्द उनीहरुलाई पार्टीको संरक्षक बनाउने बताएका छन् । साथै उनीहरुकै संरक्षकत्वमा नयाँ नेतृत्व स्थापित गर्दै पार्टी र देशलाई नयाँ दिशातिर लैजान आफूहरु अग्रसर भइरहेको नेता गुरुङले बताए ।
पछिल्लो परिस्थितिमा जसरी पार्टी नेतृत्वले चल्न सक्नुपर्ने थियो, त्यसरी चल्न नसक्दा नयाँ नेतृत्वको आवश्यकता परेको उनको भनाई छ । यो कुरालाई कार्यकर्ता र नेपाली जनताले पनि आशावादी भएर हेरिरहेको हुँदा नयाँ नेतृत्व स्थापित गर्ने बेला आएको महसुस भएको गुरुङको भनाई छ ।
आफूलगायत धेरै नेता कार्यकर्ताहरु राजेन्द्र लिङदेनलाई अध्यक्ष बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा भएको कुरा उनले सुनाए । अहिलेकै नेतृत्वकर्ताको संरक्षकत्व र अविभावकत्वमा नयाँ नेतृत्व स्थापित गर्ने भनिएको हुँदा अहिलेको नेतृत्वले समर्थन गर्छन् भन्नेमा आफू विश्वस्त रहेको नेता गुरुङको भनाई छ ।
३७ जना सांसद् भएका अध्यक्ष कमल थापाकै कारणले एउटामा झरेको, त्यसबाट पनि थापा बलियो कि निर्बलियो भन्ने कुरा त्यसबाट पनि बुझ्न सकिने बताए । थापाले उठाएका एजेण्डाहरु एकदमै राम्रा भए पनि अहिलेको नेतृत्वको कमजोरीले गर्दा राप्रपा खुम्चिँदै गएर अहिले एउटामा झर्नु परेको बताए ।
‘अहिले हाम्रो नेतृत्वको कमजोरीले गर्दा हाम्रो पार्टी खुम्चिदै खुम्चिदै गएर एउटामा झर्नु पर्यो । ३७ जनाबाट एउटामा किन आयो ?,’ उनले भने, ‘नेताहरुले यसको बारेमा समीक्षा गर्ने बेला भयो कि भएन ? किन त्यसो भयो ? व्यक्ति भन्दा पनि समय बलवान हुने रहेछ । हिजो हाम्रा नेताहरुले गरेका कमी कमजोरीहरुका कारण अहिले पुरानो नेताहरुलाई हामीले बोकेर हिड्यो भने यो पार्टी अब रहन्छ कि रहन्न भन्ने कुरा आइसकेको हुँदा अब उहाँहरुलाई सम्मानपूर्वक अविभावक बनाउँदै नयाँ नेतृत्व नआएसम्म यो पार्टी पनि चल्दैन, यो देश पनि चल्दैन ।’
प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर ९, २०७८
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बूढीगण्डकी जलविद्दुत आयोजना बनाउने र आफू अर्थमन्त्री हुँदा काम थाल्ने बताएका छन् । पुरा पढ्नुहोस्
निर्मल निवास र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको नाङ्गो हस्तक्षेप भयो : कमल थापा ३४ मिनेट अगाडि
बैतडीमा जिप दुर्घटना : चार जनाको मृत्यु, ६ घाइते १७ घण्टा अगाडि